トップページ ＞ 言語 ＞ ショナ語 ＞ History uye kuwana wokurarama chikwereti chikwereti kuongororwa kuchachinja?
History uye pakuenzanisa wokurarama chikwereti chave kupa zvose "zvakanaka, simba zvakaipa" kuti chikwereti kuongorora. Somuenzaniso, kunyange zvazvo kushandisa wokurarama zvikwereti, kana iwe kubhadhara mari zvakatemwa pamwedzi zvakanaka, anogona vakatsunga kuti "pane muripo njanji chinyorwa."
[yori] 10 kana kupfuura mhando chikwereti bvunzo chichange kugamuchirwa zvakawanda. Pane mangwanani pfungwa kuvabvunza kuongorora pamberi kutambura. [/ PC] [nopc] 10 kana kupfuura mhando chikwereti bvunzo chichange kugamuchirwa zvakawanda. Pane mangwanani pfungwa kuvabvunza kuongorora pamberi kutambura. [/ Nopc] [su_spacer size = "50"] _ x000D_
Zvisinei, uye vachiri chikwereti uye chikwereti akanyorwa, kuti chikwereti unhu nomumwe achaparadzwa yekudyidzana kutura. Mukuwedzera, muna hurumende pane yakawanda nepakati zvichiri, kwaizova yakakwirira wokuti kuti aongororwe kuti "mutsividzo mano ari murombo." Naizvozvo, avo vanoda kushandisa chikwereti, zvakakosha kuti kuderedza nengaidzo napo mune pokushandisa pechikuva.
zvakananga nguva vanofunga saizvozvo mukati mumwe
zvose masangano zvemari chero kuongororwa richiitwa munzvimbo, asi vachava chete mashoko, kunyanya "basa reshiyo, chikwereti-to-ukoshi ratios ari kuongorora chikwereti "unofanira kuona kugona kwako kubhadhara. Kuripwa nhamba "negore kubhadhara ÷ mari pagore (kusanganisira mutero)", chikwereti-to-ukoshi ratios vari dzaona ne nzira yokuita "chikwereti chitsama ÷ dzimba mitengo (kusanganisira pasi muripo)", nokuripira reshiyo somumwe nhungamiro iri "asingasviki 0.25", kuti chikwereti kuna ukoshi reshiyo Rwave mumugwagwa nyore kuti kuongorora kana zviri "asingasviki 0,8".
wokurarama chikwereti nhoroondo uye nengaidzo ndiko kufurira, vachave "mutsividzo gore" mune zvokuimba izvi. Cherechedzai kunodiwa nokuti, kunyange kana pakuenzanisa wokurarama mbiri $ 0.00, ndechokuti mumwe-muzvitatu chikwereti muganhu inowedzerwa wepagore nokuripira uwandu. Vanhu kuti pane nhoroondo uye kuwana wokurarama mbiri anoti chemhosva reshiyo kubva pamusoro payakavakirwa, 0. Ngatitaurei nechokwadi risingabereki pfuura 25. Sei uchifanira anoyera
? Panyaya kadhi watopiwa apedza
muripo, ngationei kuti kukanzura asati chikwereti kuongorora. Akaroromesawo kadhi iri chibvumirano, unogona kuderedza wegore kubhadhara kubudikidza yaizvozvo.
Zvisinei, kadhi apo pane nepakati Panguva iyi, iwe havazokwanisi kuti churn kunyange kushandisa. Kana pane kadhi kuti "anogona abhadhare mune zvishoma", isa nguva kusvikira chemhosva zvakakwana, kunyange pashure mukachikanzura pashure muripo kure nokuda zvinoshanda kuti chikwereti, izvozvo ichakurukurwa somumwe nzira.
nengaidzo pakupedzisira kuti
wokurarama chikwereti inokosha kuti iwe kuderedza nokuti, kure sezvinobvira zvikaonekwa kuti "chikwereti". Kwete chete dzimba, panyaya ine chikwereti kubhadhara kwenguva refu, zvakadai motokari, ndiri ichizobatanidza chikwereti hausi kuongorora zvishoma. Chokutanga, kuverenga chemhosva reshiyo, chikwereti-kuti-ukoshi ratios, chero kupfuura chipimo kuti wakatangwa muna apa, ngatifunge pamusoro zviyero zvimwe mhando.
[yori] 10 kana kupfuura mhando chikwereti bvunzo chichange kugamuchirwa zvakawanda. Pane mangwanani pfungwa kuvabvunza kuongorora pamberi kutambura. [/ PC] [nopc] 10 kana kupfuura mhando chikwereti bvunzo chichange kugamuchirwa zvakawanda. Pane mangwanani pfungwa kuvabvunza kuongorora pamberi kutambura. [/ Nopc] [su_spacer size = "100"] _ x000D_
[yori] 10 kana kupfuura mhando chikwereti bvunzo chichange kugamuchirwa zvakawanda. Pane mangwanani pfungwa kuvabvunza kuongorora pamberi kutambura. [/ PC] [nopc] 10 kana kupfuura mhando chikwereti bvunzo chichange kugamuchirwa zvakawanda. Pane mangwanani pfungwa kuvabvunza kuongorora pamberi kutambura. [/ Nopc] [su_spacer size = "100"] ]
[yori] 10 kana kupfuura mhando chikwereti bvunzo chichange kugamuchirwa zvakawanda. Pane mangwanani pfungwa kuvabvunza kuongorora pamberi kutambura. [/ PC] [nopc] 10 kana kupfuura mhando chikwereti bvunzo chichange kugamuchirwa zvakawanda. Pane mangwanani pfungwa kuvabvunza kuongorora pamberi kutambura. [/ Nopc] [su_spacer size = "100"]